दलान नेपाल : किन असम्भव देखिन थाले एकिकरण ?
किन असम्भव देखिन थाले एकिकरण ?
प्रमुख तीन मधेशी पार्टी विचको एकिकरण फेरी एक चोटी असम्भव देखिन थालेका छन । यस अघि आफैले तय गरेको बैठकमा अनुपस्थित भएर उपेन्द्र यादव त्यसको जनाउ दिईसकेका छन । यद्यपी नेताहरुले यादव काम बिशेषका कारण विराटनगर गएको भन्दै फर्केपछि अर्को बैठक हुने बताएका थिए । तर उपेन्द्र यादव निकटस्तहरुका अनुसार यादव पछिल्लो केही हप्तायता एकिकरण प्रक्रियावाट टाढिन थालेका छन । तर वाहिर सार्वजनिक रुपमा उनले अहिले सम्म मुख भने खोलेका छैनन । स्रोतका अनुसार पछिल्लो तीनै शिर्ष नेताहरुको बैठकमा सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले ठाकुरको अध्यक्षतामा एकिकरण घोषणा गरौ भने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसप्रति यादवले हो वा होईन भन्ने जवाफ दिएन वरु आफु पछि विचार गरेर भन्ने बताए । तर महतो र ठाकुरले यो प्रक्रियालाई लम्ब्याउनु हुदैन भनेर कार्यदलसहितको बैठक प्रस्ताव गरेपछि यादवले हुन्छ भनेर त्याहावाट बाहिरिएका थिए ।
आफैले हुन्छ भनेर तय गरेको बैठकको एक दिन अगाडी नै यादवले आफना एकजना निकटस्त नेतासंगको भलाकुसारीमा एकिकरण असम्भव रहेको जनाउ दिएका थिए र विराटनगर तिर होमिए । खासमा विराटनगरमा उनी पार्टीको जिल्ला गतिविधीमा सहभागी हुन गएका थिए । त्याहा उनका केही निकटस्त जिल्लास्तरका नेताहरुले केन्द्रमा चलिलरहेको एकिकरणको प्रसंगवारे सोध्दा यादवले एकिकरणको कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै पार्टीको गतिविधी आफनो ढंगले वढाउन सबैमा आग्रह गरेका एक नेताको भनाई छ ।
यसरी चुनाव पश्चात काठमाडौमा मधेशी नेताहरुको एउटा तप्काले एकिकरण हुन लाग्यो र त्यसको झझल्को पनि सबै पक्षवाट आउन थालिएको थियो तर फेरि किस असम्भव जस्तो देखिन थालेका छन ? त्यसो भए असम्भव रहेको मधेशी पार्टीहरु विचको एकिकरणको मुद्धालाई किन पटक पटक सनियोजित रुपमा उचालिन्छ ?
जानकारहरुको बुझाईमा उपेन्द्र यादव ठाकुरलाई सर्वमान्य नेताको रुपमा राखेर आफु अध्यक्ष भए मात्रै एकिकरणको पक्षमा देखिन्छ जुन कुनै पनि अवस्थामा तमलोपा र सदभावनाका नेताहरु मान्न तयार होला जस्तो देखिन्न । यादवसंग हालै कुराकानी गरेका एक नेताका अनुसार यादव ठाकुरप्रति सम्मान गरेपनि ठाकुरलाई अध्यक्ष मानेर जाने पक्षमा छैनन । ठाकुरलाई अध्यक्ष मानेर यादव कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी एकिकरण गर्ने पक्षमा नरहेको ती नेताको बुझाई छ । यादवले ठाकुरजी अब उमेर र स्वास्थ्य दुवैका कारण सक्रिय हुन गाहे रहेको भन्दै उहालाई आफुहरु सर्वमान्य नेताको रुपमा ठाकुरलाई राख्न खाजेको बताएका थिए ।
त्यसो भए के उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष मानेर राजेन्द्र महतो पार्टी एकिकरण गर्न तयार हुन्छ त ? यो कुरा पनि असम्भव देखिन्छ । हुनत तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरका महारथी सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले ठाकुरको अध्यक्षता विना पार्टी एकिकरण हुन नसक्ने खालको आशय प्रगट गरिसकेको छ । त्यसो फेरी हाल चलिलरहेको एकिकरण हल्ला हाथी आयो हाथी आयो फुस्स नै हुने भईसक्यो त ? एक नेता भन्छन, एकदुई दिन भित्रै बस्न लागेको बैठकले त्यसको छिनोफानो गर्दै छ ।